Farmaajo oo ku dhaqaaqay tallaabo lama filaan ah (Fahad Yaasiin oo is casilay, xil cusubna loo magacaabay) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Farmaajo oo ku dhaqaaqay tallaabo lama filaan ah (Fahad Yaasiin oo is casilay, xil cusubna loo magacaabay)
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhaqaaqay tallaabo lama filaan ah, markii xil cusub u magacaabay Agaasimaha NISA oo uu sheegay inuu is casilay.
Wareegto Saqdii dhexe kasoo baxday Madaxtooyada ayaa lagu soo saaray is-casilaadda Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, isgoo u magacaabay La-taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha, iyadoo si KMG ah xilkaasi uu Farmaajo ugu dhiibay taliyihii NISA ee G/Banaadir.
Wuxuu kaloo Farmaajo magacaabay xilalka Agaasimaha Madaxtooyada oo La-taliyihiisii hore ee Amniga loo dhiibay iyo kulan la sheegay in la isugu yeeran Golaha Amniga Qaranka.
Hoos ka akhrieo wareegtada Farmaajo:
Arrintan ayaa loo arkaa inuu Farmaajo ku difaacayo Fahad Yaasiin oo uu xilka ka qaaday Ra’iisal wasaare Rooble, ayna ka taallo dacwad ku saabsan Kiiska Ikraan Tahliil.
Previous articleXOG: RW Rooble oo ku adkeystay Laba Qodob oo ku saabsan Eryidii Fahad Yaasiin iyo Kiiska Ikraan Tahlil
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo Eedeyn Culus u jeediyey Farmaajo (Akhriso Amarro uu siiyey Taliyeyaasha iyo..)